Boomtrain: Sirdoonka Mashiinka oo loo dhisay Suuqgeeyayaasha | Martech Zone
Suuq galiyeyaal ahaan, waxaan marwalba iskudayeynaa inaan uruurinno sirdoon kusaabsan dhaqanka macaamiisheena. Hadday ahaan laheyd falanqaynta Google Analytics ama fiirinta qaababka beddelka, wali waqti badan ayey nagu qaadataa inaan ku dhex marno warbixinnadan isla markaana aan xiriir toos ah la yeelano aragtida waxqabadka leh.
Waxaan dhawaan ka bartay Boomtrain iyada oo loo marayo LinkedIn, oo xiisaynayey xiisahaygii. Boomtrain wuxuu ka caawiyaa sumadda si wanaagsan ula xiriirka isticmaaleyaashooda iyagoo u keenaya 1: 1 waayo-aragnimo shaqsiyeed oo kaxeynaya kaqeybgal qoto dheer, haynta weyn, iyo kordhinta qiimaha nolosha. Iyagu waa lakabka sirdoonka ee saadaaliya waxyaabaha ugu habboon ee emaylladaada, websaydhkaaga, iyo moobilkaaga moobaylka ah.
Asal ahaan, waxay ka caawiyaan suuqleyda xallinta 5 W:
Yaa: gaadho qofka saxda ah
Waa maxay: leh nuxurka saxda ah
Goorma: waqtiga saxda ah
Xaggee: loogu talagalay kanaal kasta
maxaad: oo fahmaan mawduucyada iyo darawalada salka ku haya waxyaabaha iyo dhaqanka isticmaalaha
Boomtrain wuxuu diiradda saarayaa hufnaanta xogta, falanqaynta, iyo fikradaha guud ahaan laba ilood oo xog aasaasi ah oo macmiil kasta ah:
Waxay aruuriyaan dabeecadda goobta isticmaale kasta, oo la yaqaan ama aan la garanayn waxayna dhisaan faraha faraha gaarka ah ee qof walba.
Isla mar ahaantaana, Boomtrain wuxuu falanqeynayaa dhammaan waxyaabaha macmiilku ka kooban yahay ee heer qoto dheer oo macno leh si loo fahmo qayb kasta oo ka mid ah sida maskaxda bini'aadamka u samayn lahayd, iyadoo laga samaynayo isku xirnaanta mowduucyada, qaybaha, iyo qaabdhismeedka.
U adeegsiga kuwan ilaha xogta aasaasiga ah, sirdoonka mashiinka Boomtrain wuxuu awood u leeyahay inuu abuuro khibrado badan oo adeegsade heer 1: 1 ah kanaallo badan iyadoo loo adeegaayo waxyaabaha qof walba u badan yahay inuu jecel yahay lana wadaago.
Cidda Ay Caawiyaan
Macaamiishooda ugu fiican waa daabacayaasha iyo suuqgeeyayaasha mawduucyada soo saara qaddarro isdaba-joog ah oo ka kooban, labadaba mid cagaaran iyo waqti xasaasi ah. Sirdoonka mashiinka ayaa sifiican uga shaqeeya xogta badan ee ay hayaan - macaamiishooda celcelis ahaan waxay u diraan ugu yaraan 250,000 emayl bishii (emayllo fara badan oo loo diro bisha oo dhan saldhig macaamiil weyni) PLUS waxay leeyihiin taraafikada joogtada ah ee goobahooda.
Baadhid Boomtrain bogga si aad wax badan ka bartaan.
Tags: boomtrainContent Suuqfalanqaynta xogtaaragtida xogtadaacadnimada xogtaemailshakhsi ahaaneedka kooban shakhsiwaxyaabaha saadaalinta ah